ကိုယ္အင္တာနက္သံုးေနတာ အျမန္ႏႈန္းမွန္မမွန္ ဘယ္လိုၾကည့္ၾကမလဲ?
19 Feb 2018 . 3:46 PM
အဓိက တုိင္းတာတဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကည့္ရမယ့္အခ်က္ကေတာ့ Download Speed နဲ႔ Upload Speed ပဲျဖစ္ျပီးေတာ့ လက္တေလာမွာ Mobile Broadband နဲ႔ Router ကတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ Wireless AP Network အမ်ားစုက ကိုယ္အသံုးျပဳတဲ့ အျမန္ႏႈန္းအေပၚမႈတည္ျပီး အမ်ားအားျဖင့္ 4Mbps ကေန 8Mbps အတြင္းရွိတတ္ျပီး စမတ္ဖုန္း SIM Card ကေန အသံုးျပဳတဲ့ Mobile Internet ေတြကေတာ့ သိသိသာသာကို ပိုျပီးျမန္ဆန္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ Ooredoo ရဲ႕ 4G+ Network ကို Speedtest App မွာစမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ 64.48Mbps အထိေတာင္ ရရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ အျမန္ႏႈန္းအေနနဲ႔ သာမန္အသံုးျပဳတာေတြတင္မဟုတ္ပဲ အင္တာနက္လုိအပ္မႈမ်ားျပားတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြအတြက္ေတာင္ အေကာင္းဆံုး အျမန္ႏႈန္းလုိ႔ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာကေတာ့ အခု အျမန္ႏႈန္းဟာ ေနရာအျပင္ အသံုးျပဳထားတဲ့ဖုန္းအမ်ိဳးအစားအေပၚမႈတည္ျပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့အတြက္ ဒီတစ္ခ်က္ကေတာ့ ထည့္ျပီး စဥ္းစားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တခါတလေ အင်တာနက် အသုံးပြုနေတုန်းမှာ ကိုယ်သုံးနေတဲ့လိုင်းက သာမန်ထက်သိသိသာသာကျသွားတာမျိုးကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Network Single ကတော့ 3G ဒါမှမဟုတ် 4G ပဲပြနေမှာဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်း လိုင်းကအမြန်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတာကို သိဖို့ခက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် တကယ်လို့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ WiFi ဒါမှမဟုတ် Mobile Internet တစ်ခုခုက နှေးသွားပြီလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင် တကယ် အမြန်နှုန်းက ဘယ်လောက်ထိရှိနေသလဲဆိုတာကို သိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အချို့သောသူတွေကတော့ သိပြီးဖြစ်နေမယ့် Speedtest Application ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Speedtest App ကို အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Google Play Store ဒါမှမဟုတ် Apple App Store မှာ Download ရယူနိုင်ပြီး စမ်းသပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Application ဟာ လက်ရှိ Google Play Store မှာလည်း Download ရယူအသုံးပြုသူ သန်း ၁၀၀ ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ App တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုုး Speedtest ကနေ အမြန်နှုန်းကို စမ်းသပ်တဲ့အချိန်မှာ Ping Response Time ၊ Download နဲ့ Upload Speed တွေကို ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး Online Mulitplayer Game တွေကစားတဲ့သူတွေကလွဲပြီးတော့ အခြားသောသာမန်သူတွေအတွက်ကတော့ Ping ရလဒ်က အရေးသိပ်မကြီးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
အဓိက တိုင်းတာတဲ့အချိန်မှာ ကြည့်ရမယ့်အချက်ကတော့ Download Speed နဲ့ Upload Speed ပဲဖြစ်ပြီးတော့ လက်တလောမှာ Mobile Broadband နဲ့ Router ကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်တဲ့ Wireless AP Network အများစုက ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ အမြန်နှုန်းအပေါ်မှုတည်ပြီး အများအားဖြင့် 4Mbps ကနေ 8Mbps အတွင်းရှိတတ်ပြီး စမတ်ဖုန်း SIM Card ကနေ အသုံးပြုတဲ့ Mobile Internet တွေကတော့ သိသိသာသာကို ပိုပြီးမြန်ဆန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Ooredoo ရဲ့ 4G+ Network ကို Speedtest App မှာစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ 64.48Mbps အထိတောင် ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အမြန်နှုန်းအနေနဲ့ သာမန်အသုံးပြုတာတွေတင်မဟုတ်ပဲ အင်တာနက်လိုအပ်မှုများပြားတဲ့အချိန်မျိုးတွေအတွက်တောင် အကောင်းဆုံး အမြန်နှုန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာကတော့ အခု အမြန်နှုန်းဟာ နေရာအပြင် အသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားအပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတွက် ဒီတစ်ချက်ကတော့ ထည့်ပြီး စဉ်းစားထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုင်းမကောင်းဘူးဆိုရင် Speedtest နဲ့ စစ်ကြည့်လိုက်ဦးနော်။